[Review] Top 5 Kem trị bọng mắt tốt & hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Kem trị bọng mắt tốt & hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Impela, imibuthano emnyama nokukhukhumala yizimo okungekho owesifazane ofuna ukuhlangabezana nazo. Kodwa bewazi yini ukuthi ngemva nje kobusuku obubodwa bokulala noma ukukhala, ukukhukhumala kuzovela ngokushesha futhi kuthinte impilo yamehlo. Ngakho isixazululo ozidingayo ngaleso sikhathi umkhiqizo ukhilimu wamehlo kuhle, kuyasebenza futhi kuphephile.
1 Izimbangela zezikhwama zamehlo
2 Indlela yokukhetha ukhilimu wamehlo ofanele
2.1 Uphawu lokuhweba
2.3 Izibuyekezo ezivela kubasebenzisi
3 Izikhwama zamehlo ezi-5 ezihamba phambili nezisebenza kahle kakhulu namuhla
3.1 1. Kunconywe I-Bioderma Sensibio Eye Anti-Puffiness Cream
3.2 2. Ukukhetha kukaPaula Clinical Ceramide Eye Cream of America
3.3 3. I-Japanese Kumargic Eye Cream
3.4 4. I-Laneige Iphelele Yokuvuselela I-Eye Cream
3.5 5. Ukhilimu wamehlo waseJapan Sana
4 Amanye amanothi Lapho usebenzisa ukhilimu wamehlo
Izimbangela zezikhwama zamehlo
Njengamanje, ukukhukhuma akubonakali kuphela kubantu asebekhulile, kodwa izinga labantu abasha ababhekana nalesi simo nalo liyakhula. Pho iyini imbangela?
Okudala: Amehlo akhukhumele angaba uphawu lokuthi umzimba wakho uyaguga. Imisipha nemigqa iqala ukuba buthaka ngokukhula futhi ibangele isikhumba esingaphansi kwamehlo sigxume. Amafutha azonqwabelana ngaphansi futhi abenze babukeke bekhukhumele, ikakhulukazi uma ugula noma ungalali kahle.
Ufuzo: Ziningi izifundo ezikhombisa ukuthi isibalo sabantu abazothola amehlo aphuphumayo sizoba kunoma iyiphi iminyaka noma ngabe sibadala noma sincane ngoba kungenzeka ukuthi banaso lesi simo ezakhini zofuzo.
I-Allergy: I-allergies nayo iyimbangela yokukhukhumala, ngoba ukuchayeka ezinhlobonhlobo ezithile kungaholela ekuvuvukeni kwamehlo kanye nokukhukhumala.
Izinkinga zokulala: Uma ungalali ngokwanele, amehlo akho abukeka emnyama futhi ekhathele, noma lapho ulele kakhulu, kungabangela ukukhukhumala.
Bhekisela: [Review] Top 5 ephumelelayo ukhilimu wamehlo amnyama namuhla
Indlela yokukhetha ukhilimu wamehlo ofanele
Akubona bonke ukhilimu wamehlo ziyafana, ngakho-ke ukukhetha umkhiqizo omuhle nofanelekile, kufanele usebenzise lezi zindlela ezilandelayo:
Lapho isidingo sokusetshenziswa siphezulu, kuzoholela ekubukeni kwemikhiqizo eminingi emisha, kanye nochungechunge lwezimpahla zomgunyathi nezilingisa. Ngakho-ke lapho ukhetha ukhilimu wamehlo, kufanele ubeke phambili ukukhetha imikhiqizo evela kumikhiqizo ehlonishwayo enezinhlelo ezicacile zokusabalalisa ezifana ne: Innisfree, Bioderma,… Ngaphezu kwalokho, lapho uthenga kufanele unake imikhiqizo oyidingayo.Kumelwe ube nolwazi olugcwele mayelana nomkhiqizo, izithako, imvelaphi, ibhakhodi…
Lapho ukhetha ukhilimu wamehlo Kufanele unikeze okuthandayo emikhiqizweni enezikhishwe zemvelo neziphephile ngoba amehlo ayisikhumba esibucayi kakhulu. Kufanele ukhethe imikhiqizo enezithako zokunciphisa ukuvuvukala njenge-Caffeine – i-diuretic, okwandisa ukuphuma kwamanzi emzimbeni. Noma iqukethe i-green tea extract, i-aloe vera, i-licorice, i-cucumber extract, … konke kusebenza ukunciphisa ukuvuvukala nokuqeda ukukhukhumeza.
Izibuyekezo ezivela kubasebenzisi
Okokugcina, lapho ukhetha ukuthenga ukhilimu wamehlo, kufanele ubeke phambili imikhiqizo eyaziswa kakhulu ngabathengi. Kufanele ubheke izinkundla ezinkulu zezimonyo ezihloniphekile ukuze uthole impendulo kanye nokubuyekezwa kwabathengi nabasebenzisi bangaphambilini. Kusukela lapho, sinombono ohloswe kakhulu wokwazi ukuthi umkhiqizo ufanelekile futhi kufanele uthenge noma cha.
Izikhwama zamehlo ezi-5 ezihamba phambili nezisebenza kahle kakhulu namuhla
Okwamehlo amasha, akhazimulayo, agwema imibuthano emnyama nokukhukhumala. Isixazululo sakho singesinye sezi-5 eziphezulu ukhilimu wamehlo izinga kamuva.
1. Kunconywe I-Bioderma Sensibio Eye Anti-Puffiness Cream
I-Bioderma Sensibio Eye Eye Cream iqukethe i-caffeine eyisithako esisebenzayo ekwelapheni ukukhukhumala. Kuhlanganiswe neHyaluronic Acid kanye neGlycerin ukusiza ukuthambisa isikhumba samehlo kahle, ukunciphisa imibimbi kanye nokusiza isikhumba esiseduze kwamehlo sihlale sibushelelezi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo awunawo amakha, parabens, silicones kanye izinto ezingabangela ukucasuka isikhumba. Ngakho-ke, umkhiqizo ufanelekile futhi uphephile ngisho nesikhumba esibucayi. Okuphawuleka kakhulu, inkimbinkimbi yemvelo i-Toleriane® isiza ukuvimbela ukwakheka kwama-molecule avuthayo, inciphise ukucasuka. Yondla kahle isikhumba esithambile eduze kwamehlo, imibuthano emnyama efiphayo, ukukhukhumala….
I-Bioderma eye cream Lokhu kunokuthungwa kwejeli elikhanyayo, kudonsa ngokushesha kakhulu futhi akunamatheli. Ukusetshenziswa okuphumelelayo, abasebenzisi bangabona ngokucace kakhulu yikhono lokuthambisa nokunciphisa ukuvuvukala. Umphumela wokunciphisa ukukhukhumeza uzobonakala kusukela ngesonto lesibili lokusetshenziswa, ngakho-ke udinga ukuphikelela ekusebenziseni njalo ngomphumela omuhle kakhulu. I-Bioderma Sensibio Eye eye cream iphinde isebenze ekwelapheni imibimbi eseduze kwamehlo, ivimbela ukwakheka kwemibimbi emisha. Ngesikhathi esifanayo, vikela indawo yamehlo emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UV ngokuhlomisa isici sokuvikela ilanga se-SPF6.
2. Ukukhetha kukaPaula Clinical Ceramide Eye Cream of America
Lo khilimu wamehlo kaPaula kanye nokhilimu wamehlo uqukethe izinhlobo ezi-5 ezihlukene zamaceramide ukondla isikhumba esiseduze namehlo. I-Retinol ne-Peptides isiza ekunciphiseni ukukhukhumala, imigqa emihle, nesikhumba esiqinile. Ihlanganiswe ne-Vitamin C ingasetshenziswa ukuthuthukisa ithoni yesikhumba, kuyilapho ivuselela ukukhiqizwa kwe-collagen, ama-anti-oxidants kanye nezibonakaliso ezihlehlisayo zokuguga. Ngaphezu kwalokho, i-vitamin E – isakhi esithambisayo esiza ukuthambisa isikhumba, sinikeze umphumela wokunakekelwa kwesikhumba omningi.
I-Eye Cream ka-Paula Lokhu kusesimweni sebhodlela elinomzimba omfushane kakhulu uma liqhathaniswa neminye imikhiqizo evela ku-Paula’s Choice kodwa elidonsa amehlo kakhulu.
Imikhiqizo ye-eye cream kaPaula ayinayo utshwala, amafutha amaminerali, ama-silicones, amakha, ama-parabens, ngakho-ke ayicasuli indawo yamehlo. I-Paula’s Choice Clinical Ceramide-Enriched Firming Cream ine-ultra-light lotion texture. Ngakho-ke, uma isetshenziswa esikhumbeni, umkhiqizo udonswa kalula futhi awubangeli isikhumba esinamafutha, esivalekile. Umkhiqizo uhlanganiswa kalula nama-moisturizers noma i-essence yokunakekelwa kwesikhumba okubanzi okuzungeze amehlo.
Intengo yesithenjwa: 1,280,000 VND
3. I-Japanese Kumargic Eye Cream
I-Japanese Kumargic Eye cream yemibuthano emnyama nokukhukhumala iyinhlanganisela eyingqayizivele nevumelanayo yengilazi eyikristalu engu-7 kanye nezithako ezisebenzayo ezi-2 ezinelungelo lobunikazi. Ngenxa yalokho, i-Hadariki Kumargic Eye isiza ekukhiqizeni i-collagen futhi isiza ukufihla imibuthano emnyama namabala. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukudala i-reflectivity enhle, ngakho abaculi be-makeup bakhetha imikhiqizo njengendawo yokufihla indawo yamehlo lapho besebenzisa izimonyo. Ngaphezu kwalokho, izithako eziyinhloko zomkhiqizo zihlanganisa i-Hyaluronic Acid, i-Collagen, i-Hydroxylated K, njll. Ngokuvamile, lolu hlu lwesithako luhle kakhulu futhi aluqukethe izinto ezicasulayo esikhumbeni.
Okwamanje I-Kumargic eye cream ukhilimu ngendlela yejeli enombala omhlophe okhanyayo. Ngakho-ke uma ugcoba esikhumbeni sakho, uzozizwa upholile futhi ubushelelezi, okuyinto enhle kakhulu, ikakhulukazi efakwe ngokushesha esikhumbeni futhi ingabangeli ukunamathela. Ukusetshenziswa komkhiqizo owaziwa kakhulu ukwelapha imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo, ukunciphisa ukukhukhumala nokuvuvukala esikhumbeni esiseduze namehlo. Ikakhulukazi, umkhiqizo nawo unomphumela wokuthambisa, ukuthambisa isikhumba ngaphansi kwamehlo, ukunciphisa amabala amnyama, izinyawo ezicacile zegwababa.
Intengo yesithenjwa: 210,000 VND
4. I-Laneige Iphelele Yokuvuselela I-Eye Cream
I-Laneige Perfect Renew Eye Cream iklanywe kahle, inobukhazikhazi ngamehlo aluhlaza apholile. Isisindo esihlangene, ngakho-ke kulula kakhulu ukusetshenziselwa uhambo lwebhizinisi, uhambo olude … Ngaphezu kwalokho, ukuthungwa kwekhilimu yamehlo ukhilimu we-viscous kancane onombala omhlophe ohlanzekile, hhayi obukhulu kakhulu kodwa hhayi oketshezi kakhulu. Ukhilimu unephunga lemvelo, kulula kakhulu ukuhogela ngoba awuqukethe amakhemikhali. Lo khilimu wamehlo we-Laneige usebenza ukuthambisa futhi ugcwalise izakhamzimba futhi ukhuthaze ukuvuselelwa kwe-collagen. Ngenxa yalokho, ngemuva kwesikhashana nje sokusetshenziswa, ukukhukhuma kanye nemibuthano emnyama kuyancipha kakhulu.
I-Laneige Iphelele Yokuvuselela I-Eye Cream ekhishwe ezithakweni eziphephile zemvelo ezifana nalezi: I-almond, Igromegranate, Ukhokho, I-Blueberry…. Ihlanganiswe ne-Skin Charger Complex kanye ne-Ceramide Repair Amanzi okuvuselela isikhumba, athuthukisa ngempumelelo ukunwebeka, ondle isikhumba esimahhadlahhadla. Thuthukisa isikhumba esizungeze amehlo sibushelelezi futhi sinempilo, futhi uvimbele ukuphindaphinda kwemibuthano emnyama nokukhukhumala futhi. Umkhiqizo ufakwa ngokuphelele esikhumbeni ngokushesha, ngaphandle kokuzizwa unamafutha noma unamathele, ulungele zonke izinhlobo zesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 849,000 VND
5. Ukhilimu wamehlo waseJapan Sana
Sana Japanese eye cream iwumugqa wezimonyo ezikhiqizwa ngokuphelele emvelweni ephephile esikhumbeni esizungeze amehlo. Ngomphumela wokungena kalula ekujuleni kwamaseli ngaphakathi kwesikhumba kanye nokuhlinzeka ngomswakama wesikhumba esiqinile. Lo khilimu wamehlo uqukethe i-retinol, ehlehlisa kancane amaseli esikhumba afile. Ukuze ukwazi ukugqugquzela ukuvuselelwa kabusha kweseli, lawula ngempumelelo i-sebum. Umkhiqizo unokuthungwa okukhilimu okumunca ngokushesha futhi akunamafutha noma okunamathelayo. Iphunga likabhontshisi kabhontshisi liyancipha, ngakho-ke ngaphezu kokunciphisa ukukhukhumala, liphinde londle futhi likhulule isikhumba.
I-Sana Japanese eye cream iyinhlanganisela ye-soya ekhishwe kanye nezithako zemvelo ezinomphumela onomsoco, zingena ngokujulile ku-epidermis esikhumbeni. Ngaleyo ndlela kuhlinzeka umswakama esikhumbeni esiqinile kanye nokulwa nemibimbi, izinyawo zegwababa. Yehlisa imibuthano emnyama futhi uncibilikise izikhwama zamehlo ngokushesha ngosuku olusha. Umkhiqizo futhi unovithamini C, i-caffeine ukunikeza imisoco edingekayo ukuze kufiphale imibuthano emnyama ezungeze amehlo. Ivuselela isikhumba ezungeze amehlo ukukhiqiza i-collagen, i-elastin futhi ikhulise ukunwebeka kwesikhumba ezungeze amehlo.
Intengo yesithenjwa: 290,000 VND
Amanye amanothi Lapho usebenzisa ukhilimu wamehlo
Nakuba kubhekwa njengephephile esikhumbeni esizungeze amehlo, ukuqinisekisa nokukhuthaza umphumela wayo ogcwele ukhilimu wamehlo. Sicela unake amanothi abalulekile afana nalawa:
Qaphela uma isikhumba sakho seso sibonakala sikhukhumele kodwa sinezimpawu ezengeziwe njengokuvuvukala, ubuhlungu obushisayo, kufanele uye esibhedlela ngokuqondile ukuze uyohlolwa.
Amehlo akhukhumele yisimo esinzima ukusinqoba ngokuphelele ngoba singabangelwa iminyaka. Ngakho-ke, uma usebenzisa ukhilimu wamehlo ekwelapheni ukukhukhumala, udinga ukuba nesineke, ungasheshi.
Kufanele uhlanze indawo yamehlo kuqala, usebenzise i-toner, bese usebenzisa ukhilimu wamehlo ukuze usebenze.
Kufanele uhlanganise ukwelashwa kokukhukhuma ngenqubo yokuphila enengqondo futhi elinganiselayo. Ungakudli ukudla okunosawoti omningi, ungalali ebusuku, ulale ngokwanele, wengeze amavithamini amaningi emzimbeni…
Ngenhla kukhona ulwazi mayelana nezimbangela zezikhwama zamehlo kanye nezi-5 eziphezulu ukhilimu wamehlo ukuthenga okuhle nokungcono kakhulu. Ngethemba, lokhu kuzoba ukwabelana okuwusizo ukukusiza ukuthi uthole ukhilimu wamehlo ophephile futhi osebenza kahle kakhulu. Ngenxa yalokho, uthola amehlo amahle, akhangayo futhi akusekho ukuvuvukala nokungakhululeki!
Xem Thêm Top 5 thuốc tăng vòng 1 tốt nhất 2022 chị em có thể tin dùng | Muasalebang